Janata Live | Janatalive is Best Online Nepali news portal for Politics, Opinions, Sports, Entertainment, Corporate, Blogs and other news from Nepal. अन्तर्वार्ता – Janata Live
महाधिवेशनबाट अब काँग्रेसको नेतृत्व दोश्रो पुस्ताले गर्छन् : डा.शंशाक कोइराला
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री शंशाक कोइरालाले पार्टीको आगामी नेतृत्व दोश्रो पुस्ताका नेताले गर्ने बताउनुभएको छ। न्युज एजेन्सी नेपालसंगको अन्तर्वार्तामा उहाँले पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण हुने बेला आईसकेकाले अबको नेतृत्व आफु, बिमलेन्द्र निधि र प्रकाशमान सिंह मध्ये एक जनाले लिने उद्घोष गर्नुभयो। पार्टी सभापति शेर बहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले अभिभावकत्वको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने भन्दै उहाँले नेताद्वयलाई आफुले त्यस किसिमको भूमिकाका लागि आग्रह गर्ने बताउनुभयो। तेरो र मेरो भन्ने स्वभावका कारण सभापति देउवा पार्टीको सफल सभापति बन्न नसकेको टिप्पणी उहाँले गर्नुभयो। नेतापुत्र त्रयको भेटघाट गुटउपगुटको अन्त्य गरि पार्टीलाई एकढिक्का बनाई सहमतिका साथ सभापतिको उम्मेदवार चयनका लागि आवश्यक वातावरण बनाउने कार्यमा केन्द्रीत...
मानव मुक्ति मार्क्स र बुद्धको समान लक्ष्य थियो
बुद्ध र मार्क्समा के भिन्नता छ भने बुद्ध व्यक्तिलाई मुक्त बनाएर समाजलाई मुक्त बनाउन चाहन्थे। मार्क्सको मान्यता समाजलाई पहिले मुक्त पार अनि व्यक्ति मुक्त हुन्छ भन्ने रह्यो। मे ५, २०२१ मंगलबारका दिन चिन्तक कार्ल मार्क्सको २०३ औँ जन्मजयन्ती हो। यसै सन्दर्भमा नेकपा एमालेका अध्ययनशील नेता टंक कार्कीसँग हामीले मार्क्सका बारेमा केन्द्रित रहेर छोटो कुराकानी गरेका छौँ: कार्ल मार्क्सलाई किन सम्झनुपर्छ? उनका विचार किन आज पनि पच्छ्याउन योग्य छ? वर्गीय रूपमा विभाजित समाज र त्यसले उत्पन्न गरेका समस्याहरूको समाधानको जुन प्रेस्क्रिप्सन मार्क्सले अगाडि सारेका छन्, त्यत्तिको कारगर, त्यत्तिको प्रभावकारी उपायहरू आजसम्म अरू कसैले पनि प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन्। समाजका दिनदुखी, उत्पीडित...
विश्वभर नै नयाँ–नयाँ भेरियन्टको प्रभाव देखिएको छ,यो चिन्ताजनक स्थिति हो : विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख (अन्तरवार्ता)
विश्व स्वास्थ्य संगठनका नेपाल प्रमुख डा.राजेश साम्भाजीराव पाण्डवले उपचार मात्रैले संक्रमण नियन्त्रण नहुने भएकाले जनस्वास्थ्यका मापदण्डलाई कडाईका साथ पालना गर्नुको बिकल्प नभएको बताउनुभएको छ । न्युज एजेन्सी नेपालसंगको अन्र्तरवार्तामा उहाँले विश्वभर नै महामारी निरन्तर रुपमा बढ्दै गएको तथा मृत्युको संख्या पनि बढीरहेकाले उपचार भन्दा पनि स्वास्थ्यको मापदण्ड पालना गर्ने तर्फ सबै सचेत इमान्दार हुन आवश्यक रहेको बताउनुभएको हो । संक्रमण नियन्त्रणका लागि खोप महत्वपुर्ण तथा शक्तिशाली उपाय भएपनि खोपको तत्काल सुनिश्चिता र पहुँचमा नरहेकाले स्वास्थ्यका मापदण्ड कडाईका साथ पालना गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । २ सय ७५ भन्दा बढी खोपहरु विकासको चरणमा रहेको र ९१ को चिकित्सकिय रुपमा प्रयोग भई...
कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्ने डरले पोखरा, अर्घाखाँची, डडेल्धुरालगायत केही ठाउँमा केही दिनअघि तरकारी नष्ट गर्ने काम भयो । ट्रकका ट्रक तरकारीलाई खाल्डो खनेर पुर्ने काममा जनप्रतिनिधिहरु नै सहभागी भए । नेपालबाट उत्पादिन कृषि उपज नष्ट गर्ने काम भए पनि भारतबाट आयातित तरकारी तथा फलफुल भने नेपालका विभिन्न बजारमा निर्वाधरुपमै खपत भइरहेकै छन् । अहिलेसम्म तरकारी, फलफुललगायतबाट कोरोनाको सङ्क्रमण सरेको रेकर्ड नभएकोले तरकारी तथा फलफुल खाडलमा गाड्ने काम गर्नु गलत रहेको जनस्वास्थ्य विज्ञहरुले बताएका छन् । यसै विषयमा टेकमान शाक्यले जनस्वास्थ्यविद् डाक्टर रवीन्द्र पाण्डेसँग कुराकानी गर्नुभएको छ । कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण सर्ने डरका कारण नेपालका केही ठाउँमा तरकारी तथा फलफुल जनप्रतिनिधिकै...
तिहारपछि औषधि बोकेका ड्रोन गाउँ–गाउँमा पुग्छन् : महावीर पुन
पहाडि क्षेत्रमा एक ठाउँबाट अर्को ठाउँसम्म पुग्न विभिन्न कठिनाइ व्यहोर्नुपर्छ । त्यसैले भौगोलिक रुपमा विकट रहेका त्यस्ता स्थानहरुमा औषधि पु-याउन हामीले ड्रोनको परिकल्पना गरेका हौँ । एसियाको नोबेल पुरस्कारको रुपमा हेरिने म्यागासेसे पुरस्कार विजेता महावीर पुनले राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रमार्फत विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा उल्लेख्य योगदान पु-याएका छन् । उनीसँग मिलेर सयौँ इन्जिनियर नेपाली परिवेश सुहाउँदो आविष्कारमा केन्द्रित छन् । काठमाडौं, चितवन, धरान, जनकपुर र पोखरामा अनुसन्धानको काम भइरहेका छन् । आविष्कार केन्द्रले अहिले कृषि, इन्जिनियरिङ, शिक्षा, बायोमेडिकल, पर्यटनलगायतका १६ क्षेत्रमा अनुसन्धान तथा परीक्षण गरिरहेको छ । यसमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण काम मेडिकल ड्रोनको आविष्कार अन्तिम चरणमा पुगेको छ । मेडिकल ड्रोनले...
पर्यटक विकासका लागि राजनीतिक स्थायित्व आवश्यक छ
आङ छिरिङ शेर्पा अध्यक्ष, नेपाल पर्वतारोहण संघ नेपाल पर्यटकीय हिसाबमा विश्वकै उत्कृष्ट गन्तव्यभित्र पर्छ । नेपाल सरकारले उचित पहल गर्न नसक्दा नेपालको पर्यटन विकास हुन सकिरहेको छैन । नेपालको पर्यटन विकासका लागि विभिन्न संघ संस्था पनि खुलेका छन् । नेपालको पर्यटन विकास गरेर देशलाई आर्थिक समृद्ध बनाउने उद्देश्यले खोलिएको संस्था हो नेपाल पर्वतारोहण संघ । यस संस्थाका अध्यक्ष हुन् आङ छिरिङ शेर्पा । उनी ४२ वर्षदेखि निरन्तर रूपमा पर्यटन विकासका क्षेत्रमा लागिरहेका छन् । त्यसमा पनि उनी नेपालका उच्च हिमाली क्षेत्रको विकास र सम्भावनाको खोजीमा लागेको पनि वर्षा भइसकेको छ । ०२६ सालमा सोलुखुम्बुको खुम्जुङमा जन्मिएका शेर्पा विश्व पर्वतारोहण महासंघको...
राजनीतिसँगै व्यवसायमा कुशल कुमार
‘राजनीतिक कुसंस्कार सुधार गर्नु जरुरी छ ।’ राजनीति नितान्त समाज सेवा हो, यसलाई व्यापारका रूपमा लिन हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छन्, दोलखाका कुमार अधिकारी । सामाजिक काम गर्न रुचाउने उनी विशेष गरेर शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा सहभागी हुँदै आएका छन् । राजनीति, समाज सेवा र व्यवसायलाई एक–अर्काका परिपूरक ठान्ने अधिकारी पछिल्लो समय नेपालको राजनीतिमा कुसंस्कार फैँलिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘राजनीतिलाई समाज सेवाका रूपमा लिनुपर्नेमा व्यापार भयो ।’ यसप्रति उनी निकै चिन्तित छन् । भन्छन्, ‘राजनीतिमा कुसंस्कार भित्रियो यसलाई परिवर्तन गर्नु जरुरी छ ।’ जीवनमा विभिन्न संघर्षहरू पार गर्दै उनी अहिले समाजसेवी तथा एक सफल व्यवसायी बन्न पुगेका छन् । युवा...
हामी राइटिस, लेफ्टिस्ट होइनौं, फ्रन्टिस्ट हौं
निमा लामा केन्द्रीय संयोजक, अल्पसंख्यक राष्ट्रिय परिषद् निमा लामा नेपाली राजनीतिमा लामो समयदेखि सक्रिय बन्दै आएका छन् । तत्कालीन नेकपा माओवादीले सञ्चालन गरेको १० वर्षे जनयुद्धमा समेत सहभागी भएका लामा २०५६ मा नेकपा एमालेमा आवद्ध थिए । तर, त्यसको १ वर्षपछि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए । उनी २०६४ मा ह्योल्मो राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाको केन्द्रीय अध्यक्षसमेत भएका थिए । नयाँ शक्ति पार्टीको केन्द्रीय परिषद् सदस्य हुन् । उनी नयाँ शक्तिकै अल्पसंख्यक राष्ट्रिय परिषद् केन्द्रीय संयोजक पनि हुन् । प्रस्तुत उनीसँग गरेको कुराकानी : तपाईं नयाँ शक्तिको जिम्मेवार सदस्य हुनुहुन्छ । नेपालको पछिल्लो राजनीतिक अवस्थालाई कसरी मूल्यांकन गर्नुहुन्छ ? अहिले नेपालसामु विभिन्न...
क्रिश्चियनको भीडमा बौद्ध धर्म
आइत लामा एक व्यक्तिको सानो प्रयासले पूरा समाजको मुहार फेर्न सकिन्छ भन्ने गतिलो उदाहरण बनेका छन् आइत लामा । हुन त उनी पढाइ लेखाइमा शून्य नै हुन् । प्रस्टसँग नेपाली भाषासमेत बोल्न जान्दैनथे । तर, पछि शिक्षा लिएर उनी साधारण लेखपढ गर्न सक्ने भएका छन् । उनको एकल प्रयासबाट धादिङ जिल्लाको तिप्लिङमा एउटा विद्यालयको स्थापना भएको छ जहाँ स्थानीय गाउँका बालबालिका निःशुल्क रूपमा पढिरहेका छन् । गाउँमा उनले विद्यालय मात्र खोलेनन, नयाँ कुरा सिक्ने अवसर पाए । हिजो गाउँमा लामाहरूको सक्रियता नहुनु उचित शिक्षाको कमीका कारण गाउँका सबै क्रिश्चियन भएको अवस्थामा आइत लामाको प्रयासबाट अहिले गाउँका केही वडाका मानिसहरू बुद्ध...